Dowlada Turkiga oo Saldhig Muhim ah ka furanaysa Soomaliya | HOBYOMEDIA
Home WARARKA GALMUDUG Dowlada Turkiga oo Saldhig Muhim ah ka furanaysa Soomaliya
Dowlada Turkiga oo Saldhig Muhim ah ka furanaysa Soomaliya
Dowladda Turkiga ayaa qorsheynaysa inay hawada sare u dirto dayax gacmeed baaxad leh sanadka 2028, iyadoona ka diri doonto saldhig la filayo inay ka sameysato dalka Somaliya.
Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in tallaabo aanan la fileyn oo dhanka cilmiga hawada ah soo kordhin doonaan.
Madaxweyne Erdogan ayaa fagaare ka sheegay in dayax gacmeed ka turjumaya qaranimada Turkiga ay u diri doonaan meeraha sare, taasoo sida uu sheegay ku imaan doonto iskaashi heer caalami ah.
“Dayax gacmeed aan leeyahay oo ka turjumaya qaranimadeena ayaan u diri doonnaa meeraha sare, taas oo ku imaanaysa iskaashi caalami ah. Xididadeena waxay ku jiri doonaan dhulka, laamaheenana waxay kor ugu bixi doonaan samada, waxaan joognaa dhulka, laakiin waxaan ku sii jeednaa hawada sare.” Ayuu yiri Madaxweyne Erdogan.
Barnaamijkan waxaa ku bixi doono lacag dhan hal bilyan oo dollarka Mareykanka, dad badan oo Soomaaliyeed-na waxay u noqon doontaa shaqo abuur, inta uu dhismihiisu socdo.
Previous articleQoor qoor oo guryahooda Ku booqday Madaxwaynayaashi hore ee Soomaliya
Next articleAqri xog:- maxay tahay sababta farmajo uu qoor qoor uga codsaday xalinta arin xasaasi ah mxyse tahay arintaas?